ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်တွေ့ဆုံခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်တွေ့ဆုံခြင်း
Posted by fatty on Aug 19, 2011 in Myanma News, News | 22 comments
သတင်းကြေငြာချိန် ခန့်မှန်းချေ စက္ကန့် ၃၀ လောက်ဘဲဆိုတော့ ကဗျာကယာ
ဘိုသီဘတ်သီ ဂျွန်းပစ်ပြီးရိုက်လိုက်ရပါတယ်။ မှတ်တမ်းလေးပါ။ ပုံကိုလည်းချုံ့ပြီး
ထည့်ရတာဆိုတော့ ပြတ်တဲ့နေရာပြတ်ကျန်ခဲ့ပါတယ် ..။
ဘာတွေ များ ပြောခဲပါလိမ့်နော်
နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ ကြီး
ကိုယ်တိုင် တွေ့ တယ် ဆိုတော့
တိုးတက်လာတော့မဲ့ နိမိတ် ပဲ
မင်္ဂလာ တစ်ပါး ပါပဲ
သိချင်တာလေး တစ်ခုရှိတယ်။ နေရာယူတာတွေက ဝေးလွန်းသလားလို့။ ခုလို ၂ယောက်တည်း တွေ့တာက တော်သေးတယ်။ တချို့ အစည်းဝေးတွေမှာဆို လူတွေကလည်း အများကြီး။ စားပွဲဝိုင်းကလည်း အကြီးကြီး။ မိုက်မပါ ဘာမပါနဲ့ ဒီတိုင်းပြောလို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကြားရပါ့မလား။ ကိုယ်ကပဲ နားလေးနေလို့လားတော့ မသိဘူး။
ဒီလူ ပါးရေနပ်ရေ ရှိတယ်လို့ ဆိုရမယ် … အန်တီစုနောက်မှာ သူ့ကိုချစ်တဲ့ ပြည်သူတွေရှိတော့ အထူးတလည် စည်းရုံးရေးဆင်းစရာမလိုပဲ အန်တီစုနဲ့ အတူညှိတာပဲ ရလဒ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာ … သဘောပေါက်သွားပုံပဲ ။
ဒေါ်စု သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံ
By မသင်းသီရိ – သောကြာ, 19 သြဂုတ် 2011
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တို့ ဒီကနေ့ တွေ့ဆုံတာဟာ နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု လမ်းကြောင်းရဲ့ ခြေလှမ်းအစဖြစ်တယ်လို့ အမျိူးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ NLD ရဲ့ ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်က သုံးသပ်ပါတယ်။ နေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်ဖို့ နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီကနေ့မွန်းလွဲပိုင်းကပဲ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းအပြည့်စုံကို မသင်းသီရိက တင်ပြထားပါတယ်။
နေပြည်တော်ကိုရောက်နေတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တို့ဟာ ဒီကနေ့ သြဂုတ်လ ၁၉ ရက် သောကြာနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံတော်ဧည့်ဂေဟာမှာ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ နေပြည်တော်မှာ ဒီကနေ့ စတင်ကျင်းပနေတဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲမတိုင်ခင် အခု ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးတွေ့ဆုံကြတာ ဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေ ပြောဆိုဖြစ်တယ် ဆိုတာကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တို့ အခုတွေ့ကြတာဟာ အားလုံးတောင်းဆိုနေတဲ့ နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းရဲ့ ခြေလှမ်းအစဖြစ်တယ်လို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရဲ့ ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်က သုံးသပ်ပါတယ်။
“နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ခြေလှမ်းစနေပြီလို့ ကျနော်တို့ ယူဆရတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့ ဒီခြေလှမ်းတွေဟာ ဆက် လှမ်းသွားရမှာပဲ။ အဲဒီ သမ္မတနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းဟာ နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလမ်းကြောင်းရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်တို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ ယူဆတာကတော့ ဒီမိုကရေစီစနစ် ထွန်းကားရေးအတွက်ကို ကျနော်တို့က ကြိုးပမ်းနေတာ။ အဲဒီလိုကြိုးပမ်းနေတော့ ကျနော်တို့က အဲဒီကြိုးပမ်းခြင်းရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခု ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်တို့ ယူဆတယ်။ သူတို့ကတော့ ဒီလိုတွေ့ဆုံခြင်းဟာ သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေးအစိတ်အပိုင်း တပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင် အဲဒါ သူတို့ရဲ့ကိစ္စပဲ။ ကျနော်တို့နဲ့ သိပ်မဆိုင်ဘူး။ ကျနော်တို့ကတော့ အကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ကောင်းတယ်လို့ ကျနော်ကထင်တယ်။ ဆိုပါတော့ တိုင်းရင်းသားများနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်ကြဖို့အတွက် ညှိနှိုင်းမယ်။ ဒါလဲ ကောင်းတာပဲလို့ ယူဆပါတယ်။ အလားတူပဲ ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ လယ်သမားကိစ္စတို့ ဘာတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေ လုပ်မယ်ဆိုရင်လဲ ကောင်းတယ်လို့ ယူဆတယ်။ အဲဒါတွေက ဒီမိုကရေစီစနစ် ထွန်းကားရေးအတွက် အစိတ်အပိုင်း တပိုင်းစီကိစ္စတွေဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်တို့ ယူဆပါတယ်။”
ဒီလို နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းတွေ စပေါ်လာတာဟာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ အရင်တွေ့ဆုံမှုတွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အောင်မြင်လာတဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တယ် လို့လည်း ဦးဝင်းတင်က မြင်ပါတယ်။
“ဦးအောင်ကြည်က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေ ဆိုတာတွေ လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ လုပ်ခဲ့တာ ၁၀ ကြိမ်လုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီ ၁၀ ကြိမ်မှာ ဦးသန်းရွှေဆီက ပြောလိုက်တဲ့ မှာလိုက်တဲ့စကားတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီကို ပို့တယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောတာတွေကို ပြန်ပို့ ဆိုတာလောက်ပဲ လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့ တွေ့ဆုံမှုတွေ ဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်တိုင်းမှာ အစီအစဉ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခုဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်တို့ ပြောချင်တယ်။ ဒါကတခုပေါ့။ တတိယတချက် ကျနော်ပြောချင်တာကတော့ သူတို့ အခုဇူလိုင် ဆွေးနွေးပွဲလုပ်နေတဲ့ ပညာသည်များ ဆွေးနွေးပွဲပေါ့ဗျာ။ ဒီဆွေးနွေးပွဲမျိုးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်တယ်ဆိုတာက ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာလုပ်တဲ့ ဒါးဗို့စ် ညီလာခံလိုဟာမျိုး လိုပဲ။ ဒါးဗို့စ်ညီလာခံမှာ ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်း ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ တက်ရောက်ကြတယ်။ အဲဒီတက်ရောက်ကြတဲ့ပွဲမှာ လူတိုင်းဟာ ပရိဿတ် ၂,၀၀၀ လောက် တက်တဲ့ပွဲမှာ ၂,၀၀၀ စလုံးနဲ့တွေ့ဆုံနေတာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့တွေ့ချင်တဲ့လူနဲ့ တွေ့ဖို့က အဓိကဖြစ်တယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေနဲ့ ဟလိုလုပ်တာကတော့ ဒုတိယတချက်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒါကို ကျနော်ထင်တယ်၊ ဒီဟာ ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အဲဒီဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်ခြင်းရဲ့ ပထမ အဓိကကိစ္စဖြစ်တယ်။ ဒုတိယကိစ္စကျမှ ဆွေးနွေးပွဲမှာ တက်ရောက်ပါဝင်ခြင်း ဆိုတာ ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်တို့ အဲဒီလိုပဲပြောချင်ပါတယ်။”
NLD ပါတီ ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်ရဲ့ သုံးသပ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ NLD ပါတီဟာ ဒီလို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ် အစဉ်တစိုက် တောင်းဆိုလာခဲ့တာဖြစ်သလို အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တို့ တွေ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ မြင်ကွင်းဟာလည်း ပြည်တွင်းပြည်ပနဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးအင်အားစု အားလုံး မျှော်လင့်နေတဲ့ မြင်ကွင်းတခု ဖြစ်တယ်လုိ့ စာရေးဆရာမောင်ဝံသက ဆိုပါတယ်။
“အရင် စကားမပြောနိုင်ဘဲဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေကနေပြီးတော့ အခုစကားပြောကြတယ်။ အခုအချိန်ကျတော့ တွေ့ဆုံတဲ့အဆင့်တော့ ရှိသွားပြီပေါ့။ တွေ့ဆုံတာကနေ နောက်ပိုင်းမှာ ဆွေးနွေးတဲ့အဆင့်ကို ရောက်သွားတယ်လို့ အဲဒီလို မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့က တိုင်းပြည်ရဲ့ လက်ငင်းပြဿနာတွေကို သူ ပြောဖို့ဆိုဖို့ အခွင့်အရေးရှိမယ်၊ အခွင့်အလမ်းရှိမယ် ဆိုလို့ရှိရင် သူဟာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ပြဿနာကို ပထမဦးဆုံး ပြောလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်တို့က အဲဒီလိုထင်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်အရပေါ့လေ ရင်းရင်းနှီးနှီး တွေ့ဆုံတာကစပြီးတော့ နောက်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတွေအထိ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ မျှော်လင့်စရာအကြောင်းတွေ ရှိပါတယ်။”
စာရေးဆရာမောင်ဝံသ ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီကနေ့ မနက် ၉ နာရီက ရန်ကုန်နေအိမ်ကနေ အစိုးရစီစဉ်ပေးတဲ့ကားနဲ့ နေပြည်တော်ကို ထွက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး နေ့လည် ၁ နာရီကျော်မှာ နေပြည်တော်ကို ရောက်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီကနေ့ စတင်ကျင်းပနေတဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို အခုချိန်ထိ မတက်သေးပေမဲ့ မနက်ဖြန်မှာ ဒီဆွေးနွေးပွဲကို တက်လာနိုင်တယ်လို့လည်း သတင်းသမားတွေက ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။
ထိပ်ပြောင်တို့အဖွဲ့က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လုံးဝမလွှတ်ပေးဘဲနဲ့
ခုလို ကိစ္စတွေကတော့ သူတို့ခံသာအောင် လုပ်ပြနေတယ်လို့ဘဲ သတ်မှတ်ရမှာဘဲ
အဖွားကြီးကိုတော့ ဒီအချိန်လောက်မှာ တော်ရုံကိစ္စလောက်နဲ့ စွဲစိမှာတော့မဟုတ်လောက်သေးဘူး
ဒါကြောင့်မို့ ကျုပ်တို့အနေနဲ့ အဖွားကြီးအရိပ်ပြရင် အကောင်မြင်သင့်တယ်
အထူးသဖြင့် အဖွားကြီး အကြပ်အတည်းထည်းရောက်သွားရရင် ဘယ်လို သူ့ကို ကူညီနိုင်မလဲဆိုတဲ့
အကြောင်းတွေကို ဆွေးနွေးသင့်တယ် ( လုပ်ရမယ် )
သူ့ကို ကိုယ့်အမေ နေရာမှာသာထား အချုပ်ထည်းကို ဘယ်နည်းနဲ့မှ မရောက်စေလိုတော့ဘူး
ပါးစပ်ကနေ အာနေရုံသက်သက်လဲ မရဘူးနော
ခင်ဗျားတို့ရဲ့ မိသားစုတွေနဲ့ အရင် စကားစမြည်းပြောကြည့်သင့်တယ်
ပြီးရင် ခင်ဗျားတို့ မိတ်ဆွေတွေ
ပြီးရင် ခင်ဗျားတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေ
ပြီးရင် ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အနီးအဝေးကလူတွေ
ပြီးရင် ရေဆေး ဟုတ်ပါဘူးယောင်လို့
ဆိုလိုတာက ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း သိလို့တော့ မပြီးဘူးဆိုတာကိုပါ
ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင် လူမှု့အသိုင်းဝိုင်းတွေက လူတွေကို လေ့လာသင့်တယ်
တစ်ကယ်ဆို လူတိုင်းမှာ ဒီလိုစိတ်မျိုးတွေရှိကြပါတယ် ခင်ဗျားတို့မှာလဲရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်
ဘယ်လိုလူမျိုးက သဘောထားကွဲလွဲနေတာလဲ အထူုးသဖြင့် ကျုပ်တို့ကို နှိပ်ကွပ်မဲ့သူဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကို
သိသင့်တယ် သိမှ အဲ့သည်လူကို နားလည်အောင်ရှင်းပြနိုင်သင့်တယ်
ဟိုက ဂယ်လုပ်လို့ ခင်ဗျားတို့လျှောကုန်မှ
သေခြာတာကတော့ ထိပ်ပြောင်တို့မှာ တစ်ကယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကို
မလုပ်သေးဘူးဆိုတာကို ကျုပ်တို့ နားလည်ထားသင့်ပြီး
အချိန်ကိုဆွဲ ဆန့်နေတယ်လို့လည်း အမှတ်ထားသင့်သေးတော့ကာ
အားလုံးက ဒီချိန်မှာ ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ကြရပြန်ရော
ဒါ့ကြောင့် ဒီအချိန်ကတော့ တော်တော် ဂွကျတဲ့အချိန်လို့ပြောရမှာဘဲ
ခွေးမသား ထိပ်ပြောင် အကြံအဖန်လုပ်နေတယ်ဆိုတာ သေခြာတယ်
ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ ထိပ်ပြောင်ကို ချဉ်းကပ်ဘို့
ဆံပင်ပေါက်ဆေး ကောင်းကောင်းလေးဆောင်ပြီး ချဉ်းကပ်သင့်ပါကြောင်း
စူပါ့စူပါ အင်တာနေရှင်နယ်အဆင့်မှီ သတင်းထောက်ကြီး
လိင်တူချစ်သူ မိုက်ကယ်ဂျောနီအောင်ပု ရဲ့ သတင်းသုံးသပ်ချက်ဖြစ်ပါကြောင်း
ဝင်ပြီး အားမပေးရင် အဆဲခံရမှာကြောက်လို့ အားပေးသွားပါတယ် ခည
But, I see it from the positive view.
Post the Bo Gyoke photo ( alone ) in Government hall is sensationally improving.
I smell the momentum of changing.
တစ်ဖက်ကို ရင်ဆိုင်ဖို့ဆိုရင် တစ်ဖက်ကို မဟာမိတ်လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ မဟာမိတ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ပြည်သူနဲ့သာ ထာဝရမဟာမိတ်လုပ်တာဟာ အလုံခြုံဆုံးလို့ သမ္မတကြီးကို အကြံပြုချင်ပါတယ်
ဘာဘဲပြောပြော some thing better than nothing ပေါ့ဗျာ။
၀ရှိတော့ဝိလုပ်လို့ ရပြီပေါ့ ၊နုတ်ကချည်းပြောလို့ လက်ကမလှုပ်ရင်ဘာမှဖြစ်မလာဘူး။
အထက်တန်းလွှာနှင့်အထက်တန်းစားကောင်တွေမှ လွှဲရင်၊အလတ်တန်းစားနှင့်ေ အာက်ခြေလူတန်းစားပြည်သူတွေနာနေတာရာစုနှစ်တ၀က်ခန့့် ရှိပြီ။
ပညာရေးကိုအရင်လုပ်ပါ။ လူတွေစိတ်ဓါတ်မှန်မှတခြားဆက်လုပ်လို့ ရမည်။
လူကြီးမင်းများကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ escort နဲနဲနဲ့ အောက်ခြေကိုမကြာခဏဆင်းပါ၊
မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာနို င်ငံခြားသားများကိုကဲ့ရဲ့ပြောဆိုမုန်းတီးခြင်းသာ လုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အများပြည်သူစားဝတ်နေရေချောင်လည်ခြင်း ၊စိတ်နှစ်လုံးသားချမ်းသာခြင်းကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်သည်။
“”လိင်တူချစ်သူ မိုက်ကယ်ဂျောနီအောင်ပု ရဲ့ သတင်းသုံးသပ်ချက်ဖြစ်ပါကြောင်း””ဟိ ဟိ. ကိုဂျော်နီရေ ဝင်ဖတ်သွားပါတယ်ရှင်။တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ ရာအတွက်ဆိုရင် ထာဝရရန်သူ၊ထာဝရမိတ်ဆွေ ဆိုတာနိုင်ငံရေးမှာ မရှိပါဘူး။
အခုထိတော့.. တစုံတယောက်ရဲ့.. ရည်မှန်းထားတဲ့လမ်းကြောင်းကနေ..လွဲချော်သွားတာမရှိသေးဘူးလို့.. ထင်မိတာပါပဲ..။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့.. ခေါင်းဆောင်အရည်အချင်းကို..တကမ္ဘာလုံးက.. စောင့်ကြည့်နေကြပါကြောင်း…။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးသိန်းစိန် မတ်တပ်ရပ်ပြီးရိုက်ထားတဲံ ဓါတ်ပုံနောက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ပုံချိတ်ထားတာ
အံ့သြဖွယ်တွေ့ရှိရပြီး အဲဒါကိုသိသာစေလိုလို့ အဲဒီပုံကို သတင်းစာမှာသုံးတယ်လို့ ထင်မိပါကြောင်း…။
ဒီမိုကရေစီ အပြောင်းအလဲတွေ ပေါ်ပေါက်လာတယ်
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ စစ်တပ် ကျောထောက် နောက်ခံပေးထားတဲ့ လက်ရှိအစိုးရရဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်တို့ ပထမဆုံး အနေနဲ့ ဒီနေ့ နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံကြတယ်လို့ နေပြည်တော်က လာတဲ့ သတင်းတွေအရ သိရပါတယ်။ အသေးစိတ်တော့ မသိရသေးပါဘူး။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဝင်းတင်က လက်ရှိ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကနေ ဒီမိုကရေစီ အပြောင်းအလဲတွေ အများကြီး ပေါ်နိုင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဦးဝင်တင်ကို ကိုနေသွင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်း ထားပါတယ်။
ဒီရက်ပိုင်းမှာပဲ ဖြစ်စဉ်အသစ်တွေ ဖြစ်လာတာတွေ အများကြီး ကျနော်တုိ့ တွေ့ရပါတယ်။ ဥပမာ ပြည်ပရောက်နေတဲ့လူတွေ ပြန်လာကြပါ ဆိုတာမျိုး ပြောတဲ့ဟာမျိုးတွေ။ ဗမာပြည် နိုင်ငံရေးအနေအထားက ဒါ ဇာတ်ပေါင်းခန်းကြီး တခုလို ခြေလှမ်းစပျိုးနေပြီလား ဒါမှမဟုတ်ရင် နိုင်ငံတကာက ဖိအားတွေကို ကြောက်လို့ ဒါဟန်ပြလုပ်နေတဲ့ အနေအထား တခုလား ဘယ်လိုမျိုးများ ဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။
“ကျနော်တို့က ဒီလိုရှိတယ်လေ။ ဇာတ်ပေါင်းခန်းကြီး သွားနေပြီလို့ ကျနော်တို့က ယူဆလောက်အောင်က သူတို့နဲ့ ကျနော်တို့က တူတာမှ မဟုတ်ဘဲ။ သီးခြားစီပဲ ဟာကြီးကို။ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရလို ဟာမျိုးနဲ့ ကျနော်တို့နဲ့ ဘာမှ မတူဘူး။ ကျနော်တို့မှာ သီးခြားပြဿနာတွေ ရှိတယ်။ ဆိုပါတော့ဗျာ အန်အယ်လ်ဒီကို ဘယ်လိုလုပ် ကိုင်တွယ်မှာလဲ၊ ဘယ်လိုထားမှာလဲ ဒီလိုပြဿနာမျိုးကအစ ကျနော်တို့မှာ မတူတာတွေ အများကြီး ရှိနေတယ်။ အဲဒီတော့ မတူကွဲပြားမှုတွေ အများကြီးရှိတဲ့ အခါမျိုးမှာ ဒီလူတွေနဲ့ ကျနော်တို့ ဇာတ်ပေါင်းခန်းသွားတယ် ဆိုတာမျိုးတော့ ကျနော်တို့ကတော့ ပြောလို့မရဘူးလို့ ကျနော်ကတော့ ယူဆတယ်။ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ကျနော်ယူဆတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းဟာ သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ ခြေလှမ်းသစ်တွေ လှမ်းလာတဲ့ ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ပြလာတယ် ဆိုတာလောက်ပဲ အများဆုံးပြောလို့ ရမယ်လို့ ကျနော်တို့ ထင်ပါတယ်။ ဥပမာဆိုပါတော့ဗျာ သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံခြားကလူတွေ ပြန်ခေါ်ရေးဆိုတာ အန်အယ်လ်ဒီမှာ ဆွေးနွေးမယ့်အထဲမှာ ပါတဲ့ကိစ္စပဲ။ အလားတူပဲ ဥပမာ ဆိုပါတော့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေတို့ ဘာတို့ လုပ်ဖို့ကိစ္စကလည်း အန်အယ်လ်ဒီမှာ ဒီ (agenda) လုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာ ပါတဲ့ကိစ္စပဲ။ အလားတူပဲ ကျန်တဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ရေးတို့ဆိုတာ အကုန်လုံးက လုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာ ပါပြီးသားကိစ္စတွေ။ အဲဒီတော့ အန်အယ်လ်ဒီ အဖို့ကတော့ ဒါ လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ငန်း ဆက်ပြီးသွားမယ့်ဟာတွေမှာ လုပ်ငန်း တဆင့်ပြီးတဆင့် တိုးလာတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်လို့ ကျနော်တို့ ထင်တယ်။ ဒါ ဇာတ်ပေါင်းခန်းတွေ ဇာတ်မပေါင်းခန်းတွေ အဲဒါတွေ မပါဘူး။ အဲဒီဟာတွေ မရှိဘူး။ အန်အယ်လ်ဒီရဲ့ လုပ်ရမယ့် လုပ်ငန်းတွေက အစီအစဉ်တွေက ချမှတ်ပြီးသား ဖြစ်တယ်။ အဲဒီအစီအစဉ် ချမှတ်တဲ့ဟာတွေ တဆင့်တိုးလာခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော် အဲဒီလိုပဲ ပြောချင်ပါတယ်။”
အဲဒီတော့ အန်အယ်လ်ဒီ မှတ်ပုံတင်ရေး ကိစ္စပေါ့လေ၊ အဘလည်း ခုနက ပြောပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်ဖို့ကိစ္စက သူတို့ကလည်း မှတ်ပုံတင်ခိုင်းနေတာရှိတယ်။ နောက်တခုကလည်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ကိစ္စပေါ့လေ။ ဒါတွေကလည်း ထင်ထင်ရှားရှားပဲ အန်အယ်လ်ဒီက လိုချင်တယ်ဆိုတာ တိုက်ရိုက်လည်းပြောပြီးသား ကိစ္စတွေ ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီတော့ အခုအနေအထားက အဲဒါတွေလည်း တခုမှ မရှိသေးဘူး၊ စကားလည်းပြောနေတယ်၊ အန်အယ်လ်ဒီကလည်း ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို လက်မခံဘူးဆိုတော့ အရပ်သားတွေ နားလည်အောင်ဆိုရင် ဒီလက်ရှိ ဒေါ်စုနဲ့ စကားပြောနေတယ် ဆိုတာက ဘာတွေအတွက် စကားပြောနေသလဲ၊ ကျနော်တို့ ဘယ်လောက် သိခွင့်ရမလဲ အရပ်သားတွေက။
“ဒေါ်စုနဲ့ စကားပြောခြင်းကိစ္စဟာ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ ပြင်စရာတွေက အများကြီး။ ဒီ စစ်အစိုးရအဆက်ဆက် လုပ်လာခဲ့တဲ့အထဲမှာ တိုင်းပြည်အတွက် နစ်နာတဲ့အချက်တွေ၊ တိုင်းပြည်အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ ကောင်းတဲ့ အနေအထားတွေက မြောက်မြားစွာ ရှိတာကိုးဗျ။ မြောက်မြားစွာရှိတော့ ကျနော်တို့က ပြင်လို့ရတဲ့ဟာကို ပြင်ဖို့အတွက် ကျနော်တို့ကလည်း တွန်းနေတာပဲ။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့။ ပြင်လို့ရတဲ့ဟာတွေ ပြင်ဖို့ကို တောင်းနေတာ။ အဲဒါကို ဒီမှာ ဇာတ်ပေါင်းခန်းတွေ ဘာတွေ ဘာမှ မရှိဘူး။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အခြေအနေသစ် တခုကို ဖန်တီးခြင်းပဲ။ အခြေအနေသစ်တခု ဖန်တီးခြင်းဟာ ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေး အတွက်၊ ဒီမိုကရေစီစနစ် ပေါ်ထွန်းရေးအတွက်ကို ဒါ အရေးကြီးတဲ့ အနေအထားတွေဆိုတာ ကမ္ဘာကလည်း အသိအမှတ်ပြုပြီးတော့ ပြောဆိုနေတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ ပြောနိုင်တာက ဘာလဲဆိုတော့ ဒီမိုကရေစီ ပြောင်းလဲရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ပါဆိုပြီးတော့ ကျနော်တို့က တွန်းနေခြင်းဖြစ်တယ်။ သူတို့ဘက်ကလည်း ဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီစနစ် ထွန်းကားရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ အပြောင်းအလဲများကို သူတို့ဘက်ကလည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လုပ်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ အဲဒီလိုပဲ ကျနော်က ယူဆပါတယ်။”
အရင် စစ်အစိုးရတုန်းကလည်း ဒေါ်စုနဲ့ တွေ့တာတွေ ရှိတယ်။ အခု သူတို့နဲ့ လုပ်ရကိုင်ရတာ ပိုပြီး ပျော့ပျောင်းမှုတွေ တွေ့နေရတာ အဘတို့ ဘယ်လို ယူဆပါသလဲခင်ဗျ။
“ဒီဟာကတော့ တခု ရှိပါတယ်။ ဟိုတုန်းက ဟာနဲ့ကတော့ သိပ်မတူဘူးဗျ။ ဟိုတုန်းက ဦးအောင်ကြည်နဲ့ ၁၀ ခါ တွေ့ခဲ့တယ်ဗျာ။ အဲဒီ ၁၀ ခါတွေ့ခဲ့တဲ့အထဲမှာ အဲဒါတွေ အကုန်လုံးက ကျနော် တခါတုန်းကလည်း သုံးခဲ့ဖူးတဲ့ စကားရှိပါတယ်။ ဦးအောင်ကြည်ဟာ ဆက်သားလိုပဲ ဒီကစကား ဟိုယူ၊ ဟိုကစကားဒီပို့ ဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းလောက်ပဲ လုပ်နေတာ။ သူကလည်း ဘာမှ အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ အနေအထားမှာ မရှိဘူး။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့က ဥပမာဆိုပါတော့ ကျနော်တို့ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာ စာတမ်းမှာ ကျနော်တို့ ပါပါတယ်။ အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ တွေ့ပါဆိုတဲ့ဟာ ပါပါတယ်။ အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုတာ အဲဒီအချိန်တုန်းက ဦးသန်းရွှေပေါ့ဗျာ ဒီဘက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါတွေက ဆွေးနွေးပွဲတွေ မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ၁၀ ကြိမ်သာ ဦးအောင်ကြည် ကူးသန်းသွားလာပြီးတော့ သွားလာလှုပ်ရှားနေတယ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးက မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အခု ဒီမှာကျတော့ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းကိုက နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲလို့ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက သုံးနှုန်းတယ်။ နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ဆိုတာနဲ့ သုံးတယ်။ ကျနော်တို့ကလည်း ဒါကို နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲလို့ သတ်မှတ်တယ်၊ ယူဆတယ်။ အများကြီးတော့ အပြောင်းအလဲတွေ ပေါ်နိုင်မယ်လို့ ကျနော်တို့ ထင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုတော့ စစ်အစိုးရ လက်ထက်တုန်းကတော့ သူကတော့ ဘာလုပ်လုပ် ဘူးခံပြီးတော့ ငြင်းနေတာပဲ။ တွင်တွင်ငြင်းနေတာဆိုတော့ ဘာတခုမှ မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အခု ဒီအစိုးရကျတော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ချင်ပါတယ်ဆိုတာ သူတို့အစိုးရအဖွဲ့ စပြီးတော့ ပေါ်ပေါက်တဲ့ အချိန်ကတည်းက ပြောခဲ့တဲ့စကား။ ပြောခဲ့တဲ့ စကားအတိုင်းလည်း အခုလည်း အပြောင်းအလဲများအတွက် လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒါတွေက လုပ်ပြတာ ဖြစ်တယ်တို့ ဘာတို့ ဆိုတာတွေကတော့ နောက်ပိုင်းမှပါ။ ကျနော်တို့ အဓိပ္ပာယ် ထပ်ပြီးတော့ သုံးသပ်ချက်တွေ ဖော်ထုတ်ရမယ့် ကိစ္စ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် လောလောဆယ် ကတော့ အခုထက်ထိကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဆွေးနွေးတဲ့ ကိစ္စမှာတော့ ဒီတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲအတွက် ဆိုတာတွေ ပေါ်လာတဲ့ ရလဒ်တွေက ဘာတွေလဲ ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်ပြတာပဲ ခေါ်ခေါ် ဘာခေါ်ခေါ်ပေါ့ဗျာ အပြောင်းအလဲတွေတော့ ပေါ်ပေါက်လာတယ်။ အခု ဒီမှာ ဒီကနေ့အထိ ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့ အခြေအနေဟာ ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ အပြောင်းအလဲများရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်တို့ အဲဒီလိုပဲ ယူဆလို့ ရပါတယ်။”
အဆုံးအဖြတ် ပေးတဲ့ လူအကြောင်းပြောတော့ ဦးသိန်းစိန်ကရော လောလောဆယ် အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ လူတယောက်အနေနဲ့ အဘ မြင်ပါသလား။
“အဲဒီလိုပဲ ယူဆရမှာပေါ့ဗျာ။ အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်ခြင်း မပေးနိုင်ခြင်းကတော့ နောက်ထပ် တပိုင်းထပ်ပြီးတော့ စဉ်းစားစရာတွေ ပြောစရာတွေတော့ အများကြီးတော့ ရှိဦးမှာပေါ့။ သို့သော် ဘာပဲပြောပြော သူက အခုက နိုင်ငံတော် သမ္မတဆိုတဲ့လူ ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီကြားထဲက သမ္မတသည် သမ္မတ ဩဇာလည်းမရှိဘူး၊ သမ္မတ ဂုဏ်သိက္ခာလည်း မရှိဘူး၊ သမ္မတရဲ့ စွမ်းရည်သတ္တိ လည်း မရှိဘူး ဆိုရင်တော့ ဒါက သူ့ကိစ္စပေါ့ဗျာ။ သို့သော် ကျနော်တို့ကတော့ ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာတော့ နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရဲ့ အထွဋ်အထိပ်ဖြစ်တဲ့ သမ္မတ။ ဒီသမ္မတနဲ့ ကျနော်တို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကရပ်ပြီးတော့ ဆွေးနွေးတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း ဘယ်ပုံစံနဲ့ ဆင်လဲဆိုတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ နှလုံးသားကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့ ဒါတွေနဲ့ ဆွေးနွေးနေတာ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆိုတာက နာမည် ဥပမာဆိုပါတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သမီးဆိုတာနဲ့ ဒါလောက်နဲ့ ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးနေတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အန်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ချုပ်လို အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး။ ဒီပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ ကျနော်တို့ ရပ်တည်ဆွေးနွေးနေတာ သူတို့ဘက်ကလည်း နိုင်ငံတော် သမ္မတဆိုတဲ့ ဂုဏ်ထား သိက္ခာနဲ့ အညီ သူတို့ကလည်း အဒီလိုဘဲ ဆွေးနွေးနေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီ သမ္မတ စစ်ခြင်းမစစ်ခြင်း၊ သမ္မတဂုဏ်ရည်များ ပြည့်စုံခြင်း မပြည်စုံခြင်း ဆိုတာကတော့ တပိုင်း ထားရလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်ကတော့ အဲဒီလိုပဲထင်တယ်။”
သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် ဒေါ်စုတွေ့သည့် သတင်း နိုင်ငံပိုင်ရုပ်မြင်တွင် ဖော်ပြ
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေပြည်တော်ရှိ သမ္မတ အိမ်တော်၏ ရုံးခန်းတွင် သောကြာနေ့ ညနေက တွေ့ဆုံခဲ့သည်ဟု နိုင်ငံပိုင် ရုပ်မြင်သံကြားက ကြေညာသွားသည်။
မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား ကြေညာချက်တွင် “ နိုင်ငံတော် သမ္မတက နိုင်ငံတော်နဲ့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများရဲ့ အကျိုးစီးပွား အတွက် နိုင်ငံတော် အစိုးရ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ခင်မင်ရင်နှီး ပွင့်လင်းစွာ ရှင်းလင်းပြောကြား ပါတယ်။” ဟု ည ၈ နာရီသတင်းတွင် ဖော်ပြသည်။
“ နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့သည် မတူကွဲပြားသော သဘောထား အမြင်များ ဘေးဖယ် ထားပြီး နိုင်ငံနှင့် ပြည်သူလူထု အတွက် အမှန်တကယ် အကျိုးရှိစေမည့် ဘုံအကျိုးစီးပွားများမှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် အလားအလာများအား ရင်းနှီးစွာ ဆွေးနွေးခဲ့” သည်ဟုလည်း ပါရှိသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဦးသိန်းစိန်နှင့် တွေ့ဆုံသော်လည်း သူ့အား ဖိတ်ကြားထားသည့် နိုင်ငံတော် အဆင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲသို့ မတက်ရောက်သော်လည်း နေပြည်တော်တွင် သောကြာနေ့တွင် ညအိပ်နားမှာ ဖြစ်သည်။
သူနှင့်အတူ ဒေါ်စုစုလွင်နှင့် ဦးခွန်သာမြင့်တို့သာ လိုက်ပါသွားသည်ဟု သူ့ပါတီ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ပြောသည်။
ဦးသိန်းစိန်မှာ အစောပိုင်းက မြန်မာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း ဗဟိုဌာနတွင် ပြုလုပ်သည့် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲသို့လည်း တက်ရောက်ကာ မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့သေးသည်။
စီးပွားရေး ပညာရှင်များ၊ အစိုးရ မဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ လွှတ်တော် အဖွဲ့အစည်း ၄ ခုမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ စာနယ်ဇင်းသမားများ၊ ဝန်ကြီးများ တက်ရောက် နားထောင်ကြသည့် ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဦးသိန်းစိန်က စီးပွားရေး တိုးတက်စေရန် ငွေကြေး မူဝါဒနှင့် ကုန်သွယ်ရေး မူဝါဒများကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲရမည်ဟု သမ္မတက ပြောကြားသွားခဲ့ကြောင်း မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားက ကြေညာခဲ့သည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ နှစ်ဦး ဒီနေ့ညနေပိုင်းက နေပြည်တော်ရှိ သမ္မတ အိမ်တော်မှာ သီးသန့်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ညနေလေးနာရီကနေ ငါးနာရီအထိ တနာရီကြာ သမ္မတနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ သီးသန့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဟာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နွေးနွေးထွေးထွေးရှိတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အတူ နေပြည်တော်ကို လိုက်ပါသွားတဲ့ ဦးခွန်သာမြင့်က ပြောပါတယ်။
“တွေ့ဆုံပွဲမှာ ဘာတွေပြောကြလဲ ဆိုတာတော့ ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း မသိဘူးခင်ဗျ၊ ပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ နွေးထွေးမှုရှိတာ တွေ့ရတယ်ဗျ။ မျှော်လင့်မယ်ဆိုရင်လည်း အဲ့အပေါ်မှာ ကြည့်ပြီးတော့ မျှော်လင့်လို့ရမယ်။ ဘာတွေဆွေးနွေးလဲ ဆိုတာကိုတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်​ ကော်မတီကို တင်ပြပြီးတော့မှ သတင်းထုတ်ပြန်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။”
နေပြည်တော်မှာ လုပ်တဲ့ နိုင်ငံတော်အဆင့် စီးပွားရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖိတ်ကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲဖွင့်ပွဲကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်ခြင်း မရှိဘဲ နောက်နေ့ တက် မတက် ဒီညမှ ဆုံးဖြတ်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တွှေ့ဆုံဆွေးနွေးမူသည် ကောင်းမွန်သောလုပ်ရပ်ပါ၊ဒေါ်စု အနေနဲ့လည်းသူဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့တွေထပ်ပိုပြီးသိပါတယ်၊အလွတ်သဘောတွေ့ဆုံပေမယ့်လည်း ကောင်းမွန်သောရလဒ်များကိုဖေါ်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။
(၁) သမ္မတသိန်းစိန်က “အမြင်မတူတာတွေဘေးဖယ်ထားပြီး အများပြည်သူအတွက်အကျိုးရှိမဲ့အကျိုးတူကိစ္စတွေ” ဆွေးနွေးရအောင် ဆိုတာရယ်။
(၂) သမ္မတ နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာ။ သမ္မတကတော် ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းနဲ့လဲတွေ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒေါ်စုကိုတွေ့ပြီး စကားပြောဖူးချင်ကြတဲ့ “သို့လော၊ သို့လော” ကတော်တွေထဲသူလဲတဦးပါပုံရပါတယ်။
(၄) ဆင်းရဲမွဲတေမှုတိုက်ဖျက်ရေး အမျိုးသားအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲကိုလေ့လာသူအဖြစ် တက်ခွင့်ရခြင်း၊
မနေ့ကသတင်းစာတွေမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ CMP (cutting/making/packaging) လုပ်ငန်းများရဲ့ဝင်ငွေခွန် နဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပဒေါ်လာစားများရဲ့ ၀င်ငွေခွန်ကို (၁၀%) ကနေ (၂%) အထိလျှောချတဲ့ကိစ္စ နဲ့ လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကို ဖိတ်ခေါ်တဲ့အမိန့်များဟာ ချိန်ကိုက်လုပ်တဲ့ကိစ္စများဖြစ်ပါတယ်။ (ကုန်သွယ်ရေးကောင်စီ ဖျက်သိမ်းခံရပြီးကတည်းက စိတ်ကောက်နေတဲ့ ရှစ်လုံး တို့တော့ မိုးကြိုးပစ်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေပါဘဲ)။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့က ဒီစည်းမျဉ်းတွေပေါ်မှာ လုပ်စားနေကြတဲ့၊ ရိုက်စားကြီးတွေဖြစ်နေကြလို့ပါဘဲ။ ဒီနေရာမှာ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကို သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ် နဲ့ တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာ ဆွေးနွေးခိုင်းတာကို သက်သက်အဆင့်နှိမ့်တယ်လို့တော့မထင်မိကြဘို့အရေးကြီးပါတယ်။
အမေရိကန်အစိုးရကတော့ ရှေ့ခြေတလှမ်းတက်တဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တရပ်ကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်။ စကားပြောနေယုံ၊ ကြေငြာချက်ထုတ်နေယုံနဲ့ မပြီးတော့ဘူး။ လက်တွေ့အလုပ်လုပ်ပြကြဘို့(အစိုးရဘက်က) လိုပြီဆိုတာပါဘဲ။
ဒါပေမဲ့ တိမ်သလ္လာမကင်းသေးတဲ့ ရှစ်လုံးတို့ဂိုဏ်းနဲ့ဆရာရှာနေကြတဲ့ စိုင်းမောက်ခမ်းကစပြီး)၀န်ကြီးမင်းကြီးငယ်တို့ဟာ၊ ဘယ်လိုဇာတ်ကွက်ဆင်ကြမလဲ၊ ဒီတိုးတက်မှုရလာဒ်ကို အလျင်မြန်အောင်ဘယ်လောက်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။ လက်ရှိတပ်မှူးကြီးတွေအချို့အရေးယူတဲ့ကိစ္စ (လက်ရှိတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်များနဲ့ အဝေမတဲ့ကြရာကဖြစ်ပုံရှိတဲ့)
အရင်က အဖြေမထွက်ခဲ့တဲ့ အလားတူ တွေ့ဆုံပွဲတွေကြောင့် လူထုနဲ့ နိုင်ငံတကာကတော့ သက်ပြင်းမချနိုင်ကြသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ထူးခြားတဲ့ခြေလှမ်းအသစ်တခုလို့တော့ဆိုပါရစေ။
မောင်မိုးညိုက ညကအိပ်မက်တခုမက်ပါတယ်…။ လာမဲ့ (၅)နှစ်တာသက်တမ်းကာလထဲမှာကိုဘဲ လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ အဓိကရ ပြဌာန်းချက်ကြီးတွေ ပြောင်းလဲမဲ့ကိန်းမြင်နေရကြောင်ပါ။